Vehivavy sy Miralenta · Jolay, 2012 · Global Voices teny Malagasy
Vehivavy sy Miralenta · Jolay, 2012
Tantara mikasika ny Vehivavy sy Miralenta tamin'ny Jolay, 2012
Amerika Latina05 Jolay 2012
Ho an'ny Fikambanana Iraisampirenena ho an'ny Fahasalamana dia 15% ny fiterahana ihany no tokony handalo fandidiana. Na izany aza, eo amin'ny sehatra tsy miankina Breziliana, maherin'ny 85% amin'ny fiterahana no mandalo fandidiana (sezarienina). Tsy ela kory izay, ny hantsana goavana misy eo anelanelan'ilay isan-jato natolotra sy ny tena zava-misy dia...
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana04 Jolay 2012
Nanjary lasa niparitaka be ny lahatsoratra manazava sary 21 izay mamerina indray ny maha-olombelona. Indrisy anefa, tsy tao anatin'izy ireo ny Afrikana sy i Afrika. Nefa tsy ny fijoroana vavolombelona goavana amin'ny fisian'ny toe-panahy maha-olona avy amin'ny kaontinanta Afrikana akory no tsy misy. Ireto misy sary vitsy sy lahatsary izay...
Azia Atsimo04 Jolay 2012
Nisy nitifitra tao an-tananan'i Peshwar i Ghazala Jawad, mpihira fanta-daza iray teratany Pakistane. Tsy fantatra mihitsy ny mombamomba ilay namono azy. Mety famonoana vokatry ny fahafaham-barakan'ny vadiny taloha ve izy io, noho izy tsy mankasitra azy hihira? Sa ve ny Talibana no nanao izany, noho izy nanohitra azy ireo hatrany...